Zinedine Zidane Oo Ka Hadlay Finalka Champions League Ee PSG vs Bayern Munich Ku Kulmayaan Axadda & Horumarka Ay Samaysay Lyon - Gool24.Net
Zinedine Zidane Oo Ka Hadlay Finalka Champions League Ee PSG vs Bayern Munich Ku Kulmayaan Axadda & Horumarka Ay Samaysay Lyon
Tababaraha Real Madrid, Zinedine Zidane ayaa ka hadlay horumarka ay sameeyeen kooxaha Faransiiska ah ee Paris Saint-Germain oo finalka Champions League la ciyaaraysa Bayern Munich iyo Lyon oo wareeggii semi-finalka timid kaddib markii ay soo garaacday Juventus iyo Manchester City.
Paris Saint-Germain ayay u tahay markii ugu horreysay ee ay soo gaadho finalka, waxaanay Axadda waajahaysaa Bayern Munich oo shan mar oo hore kusoo guuleysatay koobka, waxaana haddii ay kooxda reer France ku guuleysato ay noqon doontaa guushii ugu weynayd ee ay gaadhay taariikhdeeda.
Semi-finalkii ayay afarta kooxood ee isku soo hadhay ahaayeen laba Jarmal ah iyo laba faransiis ah, horena uma dhicin taariikhda Champions League.
Zinedine Zidane oo ku jira fasaxa xagaaga ayay warbaahintu wax ka weydiisay labada kooxood ee ka dhisan waddankiisa ee markii u horreysay soo gaadhay semi-finalka midkoodna usii dhaaftay finalka, aya yidhi: “Waa markii ugu horreysay ee ay PSG timaaddo finalka iyo Lyon oo soo gaadhay semi-finalka, waa wax u wanaagsan koxoaha iyo kubadda cagta Faransiiska.”
Tababare Zidane oo kooxdiisa Real Madrid ay ku hadhay wareeggii 16ka oo Manchester City ay ku garaacday 4-2 celceliska labadii lugood, waxa uu sharraxay sababta ay Faransiiska ugu wanaagsan tahay in kooxihiisu halkan soo gaadhaan, waxaanu yidhi: “Dadku sida caadiga ah kama hadlaan horyaalka Ligue 1, anigu se waxaan sheegayaa inuu yahay horyaal wanaagsan oo adag, in la arko kooxo Faransiis ah oo wax fiican ka qabanaya Champions League, waxay sare usii qaadaysaa horyaalka.”
ZIZOU waxa kale oo wax laga weydiiyey kooxdiisa Real Madrid ee xili ciyaareedkii dhowaanta dhamaaday ku guuleysatay horyaalka LaLiga, waxaanu yidhi: “Inaanu horyaalka dib u bilownay, dhamaysanay oo ku guuleysanay, waxay ahayd maalintii ugu wanaagsanayd noloshayda.”